Alshabaab oo sheegtay weerarkii lagu laayey dad ku noolaa gobolka Xeebta Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xaraka Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu hoobtay oo xalay lagu qaaday magaalo xeebeedka u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya Mkepetoni, kana tirsan deegaanka Lamu ee gobolka xeebta Kenya.
War kasoo baxay xarakada Alshabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaas ahaa mid loogu aargudayey sida ay yiraahdeen culimadii Muslimiinta ee lagu xasuuqay magaalada Mombaasa ee gobolka xeebaha Kenya.
Alshabaab ayaa sheegay in dilka culumo Muslimiin ah waqtiyo kala duwan loogu geystay magaalada xeebta ah ee Mombasa ay mas’uul ka ahaayeen ciidamada ammaanka xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Waxey sheegeen Alshabaab iney weerarka la beegsadeen hoteello, banki iyo saldhig boolis oo ciidamada dowladda Kenya ay ku sugnaayeen, kuna yaalla magaalada loo dalxiis tago ee Mkepetoni.
“Haku riyoona abid in aan nabad gelyo ugu noolaataan dhulkiina inta ay ciidankiinu dalkeena ku gummaadayaan shacabka Ssoomaaliyeed ee aan waxba galabsan” ayay Alshabaab ku sheegeen warka ay soo saareen.
Alshabaab waxey farriin u direen ajaanibta dalxiisayaasha ah ee Kenya ku sugan, iyagoo sheegay in Kenya tahay goob dagaal.
Waxey Alshabaab magaaladaas xalay ku gubeen saldhig boolis, bankiyo, gaadiid, kaalimo shidaal iyo dhismayaal kale oo farabadan.
Alshabaab ayaa fiidkii ilaa saaka waabarigii weerar ku hayey magaalada yar ee Mkepetoni, waxaana wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya oo shir jaraa’id galabta qabtay sheegay in weerarkaas ay ku dhinteen 48 ruux.